Bog cusub oo qarsoodi ah | RayHaber | raillynews
HomeWarqad Hordhac ahGoobta Wada Hadalka cusub ee qarsoon
20 / 02 / 2020 Warqad Hordhac ah, TURKEY
barta cusub ee sheekaysiga qarsoon
Degel la isku halleyn karo oo leh qaab dhismeedka qof walba u heli karo, oo aan wax dhibaato ah kala kulmin waxyaabaha la soo galo, ayaa la abuuray. Sidan, waxaad si toos ah u dooran kartaa websaydka saliidda ay xubnaha oo dhami heli karaan, ku noolaan karaan chat waayo, Sevgisohbet.net Waxaad ku fulin kartaa macaamilada loo baahan yahay at. Waad dooran kartaa bogga la heli karo toddobo maalmood iyo afar iyo labaatan saacadood oo waad ku qiimeyn kartaa waxyaabaha kuxiran qaab dhismeedka bogga ku habboon galinta mobilada.
Meel kasta oo Turkey, waxaad ka gali kartaa in nidaamka sida ay tahay in Azerbaijan iyo qolal kala duwan si toos ah ka raadin kartaa in ay la xisaabay site chat si qarsoodi ah. Sababta oo ah xaqiiqda ah inay jiraan qol ka kooban boqolaal xubnood, waxaad ku qiimeyn kartaa websaydhka ka soo baxa nabadgelyadiisa iyo tayadiisa adeegsiga, marwalbana waad isticmaali kartaa xeerarka goobta kala duwan adoo galaya nidaamka.
Goobaha Wadahadalka ah ee Bilaashka ah ee Free
Dhex mara tooska tooska ah Sevgisohbet Inaad awood u yeelatid inaad ka hesho cinwaanka internetka biraawsarka, inaad ka faa iideysato kalsoonida iyo isticmaalka, kaliya raadinta cinwaanka cusub ayaa ku filan. Dhageysteyaal ballaaran ayaa looga hadlay bogga, kaasoo ku habboon afar iyo labaatan saacadood gelitaanka iyo meesha aad ka raadsan karto waxyaabo kala duwan oo qof kastaa gaari karo. Thanks to bogga qarsoon, bogga xawaaladaha qarsoon ee bilaashka ah ayaa loo isticmaali karaa bogga, kaas oo qof walba u adeegsan kara oo si joogto ah loo heli karo.
Abuuritaanka Akoon Wada Hadal La'aan ah
noqon tiro aad u sarayso dadka isticmaala ee Turkey iyo Azerbaijan, si loo hubiyo in macaamiisha ka heli kartaa nidaamka mar kasta waxa ay taasi suurto gal ah in ay gaaraan xisaabta chat si qarsoodi ah. Kumanaan kun oo qof ayaa marwalba muujinaya xiisaha isla mar ahaantaas sababta oo ah waxay yihiin kuwa ugu kalsoonida badan oo la doorbido goobaha sheekaysiga qarsoon. Marka tan la eego, waxaa suuragal ah in xubin kasta uusan noqon dhibbane isla markaana uusan wax dhibaato ah ku dhicin marka loo eego xaaladda guud ee ku saabsan macluumaadkiisa shaqsiyeed.
Macluumaadka isticmaalahaaga, cinwaanka e-maylka, magaca isticmaalaha, macluumaadka guud ayaa la codsan doonaa. Haddii aad gashid macluumaadkan, waxaad marin u heli kartaa koontadaada oo aad aqrin kartaa farriimaha soo socda oo leh koontadaada nidaamka si toos ah uga socda astaantaada qarsoon ama toos u gala bogga sheekada ee qarsoon.
Goobaha Sheekooyinka Aan La Qarxin
Waxaad gali kartaa koontadaada shabakadda waqti kasta si aad u la sheekaysato, u isticmaasho websaydhka iyadoo la raacayo shuruudaha daabacaadda guud. Ma jiraan wax shuruud ah oo ah in si uun loo galo ama marin looga galo goobta waqtiyo gaar ah. Sidaa darteed si toos ah qolalka sheekaysiga Iyada oo ku xidhan qawaaniinta guud, waad samayn kartaa macaamil ganacsi kasta adigoon wax dhibaato ah qabin, waxaad adeeg ka heli kartaa bogga soo jiidanaya dareenka degdegga ah ee suuqa. Iyada oo tan loo eego, waxaad dooran kartaa degmo aad u tayo sareysa oo la isku halleyn karo, marwalba waad ku hadli kartaa si qarsoodi ah.
Goobaha Sirta ah ee Wada Hadalka
Ayadoon loo eegin goorta xubnuhu ay galayaan nidaamka, waxaa jira fursado lagu qiimeeyo mowduucyada ay rabaan inay ku wada hadlaan iyadoo la raacayo qawaaniinta guud ee websaydhka. Waxaad had iyo jeer marin u heli kartaa nidaamka adiga oo adeegsanaya macluumaadkaaga isticmaaleha bogga deg-degga ah oo tayo sare leh oo aad sii waddo bixinta si waafaqsan astaamaha sheekada ee la heli karo.
Xubnaha uma baahna inay bixiyaan lacag dheeri ah, sidoo kale waxaad marin u heli kartaa bogga bogga mar kasta oo aad rabto, waxaadna uga faa'iideysan kartaa qaab dhismeedka qolka kala duwan ee bogga sheekeyga oo bilaash ah. Hawshan, waxaad la xiriiri kartaa xubno kala duwan adoo qiimeynaya qolalka kala duwan ee goobta adigoo uga mahadcelinaya qolalka aaminka ah, tayada leh iyo adeegsiga-bilaashka ah. Adeeggu si toos ah ayuu u socday sannadihii la soo dhaafay waxaana loo sameeyay degel qof walba ah. Qofna ma awoodi doono inuu galo macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, xitaa haddii kaliya ficillo lagama maarmaan ah loo qaado iyada oo la raacayo shuruudaha guud.
InnoTrans 2012: CEL-MER Shirkadda Sare ee Suuq-galka Shirkadda sugeysa waxay sugaysaa martida
TCDD waxay noqon doontaa Hay'adda Gaadiidka TCDD
Maanta taariikhda: 10 Janaayo 1989 waa ku xigeen ka mid ah Tareenka Anadolu ...
Gaadiidka ayaa ku burburtay isagoo ku dhexjiray tareenka
İsa Apaydın Shaqaalaha Waddada Tareenada ee Centennial ayaa la hadlay Mehmet Ilter
Cinwaan Dood-wadeyaasha aan xadidnayn
Codsiyada Goobta Warshadaha Cusub ee Motorized ee Cusub Oo La Fidiyay
Tokat Industrial Estate Iska Kaga Baxsan Wadooyinka Ceelka
Mersin Freight Forwarders Xarunta Soodhaweynta ee Dalalka ku xeeran
wada sheekeysi toos ah